Nosakanan’i Myanmar ny aterineto ao amin’ny faritra miady ao amin’ny fanjakana Rakhine sy Chin · Global Voices teny Malagasy
Tsy taterin'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena ny ady ao Rakhine
Voadika ny 26 Jona 2019 10:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Italiano, русский, Español, Français, English
Fianakaviana Rohingya any Sittwe, renivohitry ny Fanjakana Rakhine. Saripikan'i DYKT Mohigan, Flickr (CC BY 2.0)
Ny lahatsoratra manaraka dia nosoratan'ny mpanoratra Myanmar iray izay naniry ny tsy hitonona anarana noho ny antony ara-piarovana.
Ny 21 Jona, nosakanan'ny governemantan'i Myanmar nandritra ny fe-potoana tsy voafaritra ny aterineto tany amin'ireo faritra sasany ao amin'ny fanjakan'i Rakhine sy Chin izay voalaza fa mba hitazonana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ao amin'ireo faritra ireo.
Nahazo baiko avy amin'ny governemanta ny Telenor, Ooredoo, ny Paositra sy ny Fifandraisandavitra any Myanmar (MPT) mba hanapaka ny aterineto any amin'ny faritra valo ao amin'ny fanjakan'i Rakhine any andrefan'i Myanmar ary toerana iray ao amin'ny fanjakana Chin ao avaratr'i Myanmar. Mijanona mandeha kosa ny antso am-peo sy ny SMS. Amin'izao fotoana hanoratana izao, dia mbola tsy mandeha ny aterineto ary tsy misy ny fanambarana mikasika ny fotoana hamerenana azy amin'ny laoniny.
Nanazava ny Sekretera Maharitra ao amin'ny Minisiteran'ny Fitaterana sy ny Fifandraisana, U Soe Thein, fa natao hanamafisana “ny fiarovana, ny fandriampahalemana ary ny filaminana” ny fepetra. Toerana nahitana fifandonana teo amin'ny miaramila Myanmar sy ny vondrona ara-poko Rakhine mitam-piadiana, Arakan Army (AA) hatramin'ny taona 2015 ny fanjakana Rakhine sy ny faritra atsimon'i Chin.
Natsangana tamin'ny taona 2009 mba hitaky fahaleovantena tao amin'ny faritra, nifanandrina matetika tamin'ny tafika Myanmar ny AA ary nihamafy ny fifandonana taorian'ny Aogositra 2015. Nipoaka tamin'ny Aprily 2019 ny ady farany indrindra.
Faritra tandrefana marofoko ao Myanmar izay marobe ny mponina Rakhine Bodista, maherin'ny 4 tapitrisa eo ho eo ny fanjakan'i Rakhine. Mandritra izany fotoana izany, tombanana ho iray tapitrisa ny isan'ny mponina Rohingya, izay foko vitsy an'isa Miozolomana monina ao amin'ny fanjakana. Tsy ankatoavin'nygovernemantan'i Myanmar ho toy ny vahoaka ara-poko any Myanmar ny Rohingya ary maro amin'izy ireo no tsy nahazo zom-pirenena.
Nahasarika izao tontolo izao indray ny fanjakana Rakhine raha nanomboka nanao “hetsika fanadiovana” hamelezana ny Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) [tafi-panavotana na Rohingya Arakan] ny miaramila Myanmar taorian'ny fanafihana nataon'ny ARSA tamin'ny 25 Aogositra 2017. Nahafatesana olona am-polony sy fandoroana ireo tanàna Rohingya izay nanery olona an'arivony hitsoaka sy hialokaloka any amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina any Bangladesh ity fifandonana tamin'ny ARSA ity.
Ny alin'ny 21 jona, nandefa hafatra an-tsoratra ireo mpandraharahan'ny finday, mampahafantatra ireo mpanjifany fa “tapaka mandritra ny fotoana fohy ny aterineto sy ny tolotra tahiry noho ny baikon'ny Minisiteran'ny Fitaterana sy ny Fifandraisana. Mandeha kosa ny antso an-tariby sy ny SMS.” Pikantsary nalaina tao amin'ny Narinjara News.
Araka ny Lalàna Andininy faha-77 (2017) momba ny fifandraisandavitra, manana fahefana hiara-hiasa amin'ireo mpanome tolotra aterineto ny governemanta Myanmar mba hifehy na hanakana ny tolotra fifandraisana ho tombontsoam-bahoaka. Nilaza i Maung Saungkha avy ao amin'ny Fikambanana ho an'ny Fahalalaham-pitenenana ao Myanmar, Athan fa tsy tranga vaovao any Myanmar ny fanakatonana ny aterineto, milaza ohatra toy ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanakana ny fidirana amin'ny aterineto ho setrin'ny fihetsiketseham-panoherana ny governemanta tamin'ny taona 2007 (izay lasa fantatra amin'ny hoe Revolisiona Jaky). Nampitandrina i Saungkha fa mety ho fambara ho amin'ny fanitsakitsahana bebe kokoa ny zon'olombelona ny fanakanana ny angona finday sy ny fifandraisana amin'ny aterineto, ampirisihana ny governemanta sivily mba tsy ho mpiray tsikombakomba amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ka manaisotra ny famerana ny aterineto ahafahan'ny olona mizara vaovao momba ny toe-javatra.
Tsy misy antony manokana nomen'ny governemanta mikasika ny antony nanakatona ny aterineto amin'izao fotoana manokana izao. Mahita ireo mpanohana eo an-toerana fa toa tetikady hamerana ny fifandraisana eo an-toerana ilay fepetra na koa hanakanana ny vaovao farany momba ny toe-draharahan'ny ady mba tsy hivoaka. Na dia azo tapahana aza ny antso an-tariby sy ny hafatra SMS, sarotra kokoa ny manaramaso ny fampiharana aterineto fandefasan-kafatra voaaro amin'ny fanafenan-tsoratra. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety vao haingana, nandà ny mpitondratenin'ny tafika iray ka milaza ho tsy mahalala ny antsipiriany momba ny baiko mametra ny fidirana amin'ny aterineto.
Ny 24 Jona, telo andro taorian'ny fanakatonana, namoaka fanambarana iombonana ampahibemaso ny vondrona fikambanana fiarahamonina sivily ao Yangon, renivohitra faharoa ao Myanmar, miantso ny governemanta mba hanaisotra ny famerana ny aterineto any amin'ireo faritra voakasika ireo ary handinika indray ireo lalàna efa misy izay mahatonga ny fampiharana ireo fepetra ireo. Ankoatra izany, nangataka hatrany tamin'ny Parlemanta Iraisana ny Parlemantam-panjakana Rakhine mba hanala avy hatrany ireo fameperana ireo.
Na dia mitatitra tsy tapaka momba ny vaovao mikasika ireo sivily namoy ny ainy sy ny fisamborana ataon'ny governemanta amin'ireo sivily ampangaina ho mifandray amin'ny Tafika Arakan aza ny sampan-draharaham-baovao eo an-toerana Narinjara, dia mbola zara raha notaterin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana ny fifandonana ao Rakhine. Tsy azo idiran'ireo tambajotran'ny media mahazatra maro ihany koa ny faritra noho ny baikon'ny governemanta mba hifehezana ny vaovao momba ny fifandonana mitam-piadiana sy ny hetsika miaramila, indrindra ireo izay mahakasika ny Rohingya tamin'ny lasa. Manazava manokana ny ampahany izany hoe nahoana no tsy nahazo fitantarana betsaka tao amin'ny fampahalalam-baovao ny fanakatonana ny aterineto nandritra ny andro maromaro tany amin'ny faritra lehibe iray ao amin'ny firenena ary zara raha niteraka fanehoan-kevitra teo amin'ny vahoaka izany.